Umambo hwaMwari​—Kukosha Kwahunoita Kuna Jesu
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiSutu (Lesotho) Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikaonde Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malay Maltese Maya Mazatec (Huautla) Mongolian Moore Myanmar Nepali Ngabere Norwegian Nyaneka Nzema Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tatar Thai Tigrinya Tshiluba Tsonga Turkish Twi Ukrainian Umbundu Vietnamese Wayuunaiki Xhosa Zande Zulu
NYAYA IRI PAKAVHA | UMAMBO HWAMWARI—HUNOGONA KUKUBATSIRA SEI?
Paaiita ushumiri hwake panyika, Jesu akataura pamusoro pezvinhu zvakawanda. Somuenzaniso, akadzidzisa vateveri vake kuti vanofanira kunyengetera sei, vangafadza sei Mwari uye kuti vangawana sei mufaro wechokwadi. (Mateu 6:5-13; Mako 12:17; Ruka 11:28) Asi Jesu ainyanya kutaura nezveUmambo hwaMwari kupfuura chero chii zvacho. Ndihwo hwaiva pamwoyo pake.—Ruka 6:45.
Sezvataona munyaya yapfuura, upenyu hwaJesu hwaiva ‘hwokuparidza nokuzivisa mashoko akanaka oumambo hwaMwari.’ (Ruka 8:1) Akashanda nesimba zvikuru, achifamba mazana emakiromita achitenderera nyika yeIsraeri kuti adzidzise vanhu nezveUmambo hwaMwari. Ushumiri hwaJesu hwakanyorwa mumabhuku mana eEvhangeri. Mabhuku aya anotaura nezveUmambo kanopfuura ka100. Kakawanda kacho anenge ari mashoko aJesu, asi anofanira kunge akataura zvimwe zvakatowanda nezveUmambo hwaMwari!—Johani 21:25.
Sei Umambo hwaikosha zvikuru kuna Jesu paaiva panyika? Chimwe chezvikonzero zvacho ndechokuti Jesu aiziva kuti Mwari ainge amusarudza kuti ave Mutongi weUmambo hwacho. (Isaya 9:6; Ruka 22:28-30) Asi Jesu aisafunga kuzviwanira simba nemukurumbira. (Mateu 11:29; Mako 10:17, 18) Kuparidza kwaaiita nezveUmambo aisakuitira kuti zvimunakire. Chikuru ndechokuti Jesu agara aine hanya neUmambo hwaMwari * nemhaka yezvahuchaitira vaya vaanoda, kureva kuti Baba vake vekudenga nevateveri vake vakatendeka.
UMAMBO HUCHAITIREI BABA VAJESU?
Jesu anoda chaizvo Baba vake vekudenga. (Zvirevo 8:30; Johani 14:31) Anoyemura rudo rwavo, tsitsi dzavo uye kururamisira kwavanoita. (Dheuteronomio 32:4; Isaya 49:15; 1 Johani 4:8) Saka Jesu anovenga nhema dzinotaurwa nezvaBaba vake, nhema dzakadai sokuti Mwari haana hanya nekutambura kwevanhu uye kuti anoda kuti titambure. Ndicho chimwe chezvikonzero zvaiita kuti Jesu ade kwazvo kuzivisa “mashoko akanaka oumambo.” Aiziva kuti nokufamba kwenguva Umambo hwaizochenesa zita raBaba vake. (Mateu 4:23; 6:9, 10) Huchaita sei izvozvo?
Jehovha achashandisa Umambo kuita zvinhu zvikuru zvichabatsira vanhu vake. “Achapukuta misodzi yose” pamaziso evanhu vakatendeka. Jehovha achabvisa zvinhu zvinokonzera misodzi iyoyo, achiva nechokwadi chokuti “rufu haruchazovipo, kana kuchema kana kuridza mhere kana kurwadziwa hazvingazovipozve.” (Zvakazarurwa 21:3, 4) Mwari achabvisa kutambura kwose kwevanhu achishandisa Umambo. *
Ndokusaka Jesu aida kwazvo kuudza vanhu nezveUmambo! Aiziva kuti hwaizoratidza kuti Baba vake vane simba netsitsi zvikuru. (Jakobho 5:11) Jesu aizivawo kuti Umambo hwacho huchabatsira vanhu vaanoda—vanhu vakatendeka.
UMAMBO HUCHAITIREI VANHU VAKATENDEKA?
Nguva refu Jesu asati auya panyika aigara kudenga naBaba vake. Baba vakashandisa Mwanakomana pakuita kuti zvimwe zvinhu zvose zvivepo, zvakadai sematenga azere nenyeredzi uye nyika yakanaka nezvisikwa zviri pairi. (VaKorose 1:15, 16) Asi pane zvose izvi Jesu ‘akafarira vanhu kwazvo.’—Zvirevo 8:31.
Paaiita ushumiri hwake, Jesu akaratidza kuti anoda vanhu. Kubva pakutanga chaipo, akataura kuti ainge auya panyika ‘kuzozivisa varombo mashoko akanaka.’ (Ruka 4:18) Asi Jesu haana kungogumira pakutaura nezvekubatsira vanhu. Aigara achiratidza kuti anoda vanhu. Somuenzaniso, vanhu vakawanda pavakaungana kuti vateerere zvaaitaura, Jesu “akasiririswa navo, akarapa vairwara vavo.” (Mateu 14:14) Mumwe murume aiva nechirwere chairwadza zvikuru paakaratidza kuti aitenda kuti Jesu aigona kumuporesa kana aida hake, Jesu akamunzwira tsitsi. Akaporesa murume wacho, ndokumuudza kuti: “Ndinoda. Cheneswa.” (Ruka 5:12, 13) Jesu paakaona shamwari yake Mariya achichema hanzvadzi yake Razaro, Jesu “akagomera neshungu,” “akanetseka” uye “akasvimha misodzi.” (Johani 11:32-36) Akabva aita zvainge zvisingatarisirwi. Akamutsa Razaro kunyange zvazvo ainge ava nemazuva mana afa!—Johani 11:38-44.
Zviri pachena kuti Jesu aiziva kuti zvaakaita panguva iyoyo zvaizobatsira vanhu kwenguva duku chete. Aiziva kuti vose vaakaporesa vaizorwarazve uye vose vaakamutsa vaizofazve. Asi Jesu aizivawo kuti Umambo hwaMwari hwaizogumisa matambudziko iwayo zvachose. Ndokusaka Jesu asina kungoita zvishamiso chete; akashandawo nesimba pakuparidza “mashoko akanaka oumambo.” (Mateu 9:35) Zvishamiso zvake zvaingova nzwisa yezvichaitwa pasi rose neUmambo hwaMwari munguva pfupi iri kutevera. Funga zvinovimbiswa neBhaibheri kuti zvichaitika panguva iyoyo.
Panenge pasisina zvirwere.
“Panguva iyoyo maziso emapofu achasvinudzwa, uye nzeve dzematsi dzichavhurwa. Panguva iyoyo munhu akaremara achakwakuka sezvinoita nondo hono, rurimi rwembeveve ruchashevedzera ruchifara.” Uyewo, “hakuna mugari wemo achati: ‘Ndiri kurwara.’”—Isaya 33:24; 35:5, 6.
Panenge pasisina rufu.
“Vaya vose vari mumakuva vachayeukwa uye vachanzwa inzwi rake, vobuda.”—Johani 5:28, 29.
“Kuchava nokumuka.”—Mabasa 24:15.
Panenge pasisina vanhu vasina pokugara kana kuti vasina mabasa.
Panenge pasisina hondo.
“Anogumisa hondo kusvikira kumugumo wenyika.”—Pisarema 46:9.
“Rumwe rudzi haruzosimudziri rumwe rudzi bakatwa, havazodzidzizve kurwa.”—Isaya 2:4.
Panenge pasisina kushayikwa kwezvokudya.
“Nyika ichabereka zvibereko zvayo; Mwari, iye Mwari wedu, achatikomborera.”—Pisarema 67:6.
“Panyika pachava nezviyo zvizhinji kwazvo; zvichafashukira pamusoro pemakomo.”—Pisarema 72:16.
Panenge pasisina urombo.
“Murombo haazokanganwiki nguva dzose.”—Pisarema 9:18.
“Iye achanunura murombo anochemera kubatsirwa, pamwe chete nomunhu anotambudzika nomunhu wose asina mubatsiri. Achanzwira tsitsi munhu akaderera nomurombo, uye achaponesa mweya yevarombo.”—Pisarema 72:12, 13.
Paunofunga pamusoro pezvinhu izvozvo zvichaitwa neUmambo hwaMwari, unogona here kuona kuti nei Umambo huchikosha zvikuru kuna Jesu? Paaiva panyika, aida chaizvo kutaura nezveUmambo hwaMwari kumunhu chero upi zvake aizoteerera, nokuti aiziva kuti Umambo hwaizogumisa matambudziko ose aripo.
Zvinovimbiswa neBhaibheri nezveUmambo zvinokufadza here? Kana zvakadaro, ungadzidza sei zvakawanda nezveUmambo ihwohwo? Uye zvii zvaungaita kuti uve nechokwadi chokuti uchabatsirwa nezvikomborero zvahwo? Nyaya yokupedzisira panyaya idzi dzinotevedzana ichapindura mibvunzo iyoyo.
^ ndima 5 Nyaya ino inotaura nezvemaonero ari kuita Jesu zvinhu iye zvino sezvo ari kutorarama kudenga, uye kubvira paakadzokera kudenga, hapana mubvunzo kuti Umambo hwakaramba huri pamwoyo pake.—Ruka 24:51.
^ ndima 8 Kuti uone panotaurwa zvikonzero zvinoita kuti Mwari abvumire kuti vanhu vatambure kwekanguva, ona chitsauko 11 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.